Aza Manao Izay Hahatezitra Ireo Anti-Kremlin ao Rosia. Tsy Ho Tianao Rehefa Tezitra ny Mpanohitra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Avrily 2017 9:00 GMT
Alexei Navalny, Rosiana mpitarika ny fanoherana. Loharano: Navalny.com
Izay noheverina ho valibontana natao tamin'i Alexei Navalny, mpitarika ny fanoherana ao Rosia no lasa nivadika ho fanoherana an-tserasera andro alatsinainy.
Voatondraka ranoka miloko maitso mamono otrikaretina fanadiovana efitra fivoahana i Navalny, izay mpitsikera ny Kremlin izay nanao fanadihadiana ireo politisiana goavana ao Rosia—ary ny farany teo dia ny praiminisitra Dmitri Medvedev— ny Orina Mpanasoa miady amin'ny kolikoly iadidiany indray alatsinainy nandritra ny fanohizany ny fanentanana tao an-tanànan'i Barnaul tao Siberia. Vantany vao vita izany dia nanomboka namoaka ny sarin'ny tavany voaloko maitso, tao amin'ny tambajotra sosialy, ho firaisankina aminy ireo Rosiana ao amin'ny fanoherana.
Rehefa voatondraka teo anoloan'ny biraon'ny fanentanany i Navalny, dia nolokoiny maitso manontolo ny tavany ary niantso ny mpanohana azy izy hanatevin-daharana ny fihetsiketsehana anoherana ny kolikoly eo amin'ny sehatra nasionaly ny alahady manaraka an'io. “Ny tiako lazaina dia diso hevitra ny ao Kremlin raha mihevitra fa tsy handrakitra lahatsary vaovao amin'ny tavako miloko maitso aho” hoy ny fanamafisan'i Navalny tao amin'ny lahatsary navoakany tao amin'ny YouTube. “Hanohy amin'ny fanaovana izany aho, satria hahazo mpijery maro kokoa aza aho amin'ny tavako sahala amin'izao. Tsy hanakana ahy ny toy izao. Tiako ianareo rehetra handray anjara amin'ny fihetsiketsehana anti-kolikoly hotontosaina manerana ny firenena amin'ny 26 marsa ho avy izao”.
Tao anatin'ny ora vitsy dia nanao “flashmob” an-tserasera, tamin'ny famoahana ny sarin'izy ireo voarakotra loko maitso tao amin'ny media sosialy, ny mpanohana an'i Navalny. Namoaka ny sariny sy ny zananilahy ao anaty tava miloko maitso tao amin'ny Instagram i Vika Navalnaya, vadin'i Oleg rahalahin'i Navalny, izay voaheloka higadra telo taona sy tapany noho ny fanodikodinam-bola tamin'ny desambra 2014.
Vady sy zanakalahin'i Oleg Navalny!
Nisy ireo nanohana an'i Navalny tamin'ny fampiasana ny tenirohy #зеленыйНавальный (#NavalnyMaitso).
Nanapa-kevitra ny hanohana ny flashmob izahay eto! #NavalnyMaitso #Navalny208
Alexei, miaraka aminao ny ekipam-panentanana eto Kazan! Manohana anao izahay ! ##NavalnyMaitso
Nikolai Danilov. Loharano: Alexey Yushenkov, Facebook.
Naneho ny fanohanany ampahibemaso kosa ny hafa nandritra izany fotoana izany: Naneho ny fanoherany teo amin'i Kremlin, izay nitazonan'ny polisy azy ho manitsakitsaka ny fitsipiky ny fanaovana fihetsiketsehana eo amin'ny Kianja Mena, tamin'ny nandokoany ho maitso ny tavany i Nikolai Danilov, bilaogera. Hoy i Danilov tamin'ny tranonkala Meduza:
Nolazain-dry zareo fa nifampiresaka am-panajana tamiko ry zareo, ary nolazaiko ihany koa fa hajaiko ny hevitr'izy ireo saingy nandany 40 minitra aho nandokoako maitso ny tavako. Mety tsara ny fihetsika nataoko, tsy nihiaka teny tarigetra aho—te-haka sary vitsivitsy fotsiny aho. ary nahita marimaritra iraisana izahay tamin'ny farany—Niverina tany amin'ny toerana nakana ahy aho, ary nanohy tamin'ny fakana sary.
Fanahifahana natao an'i Navalny
Misy hatrany ny vatomisakana an'i Navalny, izay nanambara tamin'ny desambra lasa teo fa hifampihaika amin'i Vladimir Putin amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny marsa 2018 ho avy izao, isaky ny dingana tsirairay nataony amin'ny fanentanana. Nomelohina ho nanao fanodikodinam-bola izy tamin'ny volana desambra ary voasazy dimy taona am-ponja sazy mihantona, izay midika fa voasakana tsy ho afa-mifaninana amin'ny fifidianana izy eo amin'ny sehatry ny lalàna. Tamin'ny volana Janoary lasa teo, noteren'ny mpanao lalàna federaly ny Yandex.Money izay tolotra mitovy amin'ny PayPal hanakana ny fanomezam-bola ara-politika avy amin'olon-tsotra, ary avy amin'izany no ahafahany mamono ny loharanom-bola fanohanana manandanja indrindra amin'ny fanentanan'i Navalny.
Efa voadaroka ihany koa i Navalny tany aloha tany: ankoatra ireo zava-nitranga hafa, tamin'ny Febroary 2016, nisy mpanao fihetsiketsehana iray nitoraka mofomamy tamin'ny tavan'i Navalny, ary iray volana taty aoriana, nisy lehilahy tsy fantatra roa nitoraka azy mofomamy sy fimailo feno tsiranoka fotsy tao anatiny. Tamin'ny volana mey tamin'ny herintaona, efa voadaroka tao amin'ny seranam-piaramanidin'i Anapa, tanàna iray any atsiamon'i Rosia i Navalny sy ny mpanohana azy. Ary vao haingana, nitoraka atody an'i Navalny tao Ufa, Samara, Nizhny Novgorod, Kemerovo, ary Novosibirsk ireo mpanohitra azy.
Tsy i Navalny irery no politisiana voatondraka maitsomaitso : tamin'ny volana lasa dia nisy olona tsy fantatra nanondraka tamin'ny fitsindrona loko maitso ny mason'i Mikhaïl Kassianov, politisiana avy amin'ny fanoherana. Voatondraka karazan-javatra ihany koa i Liudmila Oulitskaïa, mpanoratra tantara foronina sy Igor Kaplian, filohan'ny komity rosiana misoroka ny fampijaliana olona, na dia tsy fantatra loatra aza raha misy dikany manokana ilay loko maitso.